Diego Maradona” Lionel Messi 20 mar ayuu Suuliga galaa Kulan kasta inta uusan bilaaban Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Diego Maradona” Lionel Messi 20 mar ayuu Suuliga galaa Kulan kasta inta uusan bilaaban Sabab?
(13-10-2018) Kabtankii iyo Macalinkii hore ee xulka dalka Argentina Diego Maradona ayaa ,mar kale Weerar ku qaaday Cayaaryahan Lionel Messi kaas oo uu ku sheegay in uusan weligii noqon Hogaamiye wanagsan.
Diego Maradona” Lionel Messi waa cayaaryahan weyn laakiin weligii ma noqon Hogaamiye wanaagsan sida Cristiano Ronaldo oo kale sidaa waxa uu Maradona u sheegay Wargeyska Fox Sports qaybta ka soo baxda dalka Mexico.
Maradona oo sii hadlaya ayaa yiri aqoon ayaan u leeyahay Lionel Messi xiligii aan Macalinka u ahaa Gaar ahaan koobkii aduunka 2010 kulan kasta oo aan cayaareyno kahor Suuliga ayuu geli jirey ku dhawaad 20 mar taasi waa fuleynimo mana ahaan dhaqan Hogaamiye ayuu hadalkiisa sii raaciyey Diego Maradona.
Cayaaryahankii hore ee Xulka Argentina u qaaday koobkii aduunka ee sanadkii 1986 Diego Maradona ayaa sidoo kale aaminsan in dalkiisu ku Guuleysan lahaa koob aduun hadii Lionel Messi uu ahaan lahaa Hogaamiye Wanaagsan sida Portugal ugu guulesteen koobka yurub waayo Ronaldo ayaa ahaa Hogaamiye wanaagsan oo xulkiisa Guulo u horseedey.
Ma ahan markii koobaad ee uu Diego Maradona Weerar afka ah ku qaado Lionel Messi oo dalkiisu ka soo laabtay koobkii aduunka ee 2018 markii ay ku soo hareen wareega 16 ka aad ayaana loogu dhaleeceeyey Messi Guuldarada soo gaartay dalkiisa iyo kaharitaanka koobka aduunka.